‘पदाधिकारीलाई इन्धन’ शीर्षकको बजेट काटेर ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् ! « Khabarhub
‘पदाधिकारीलाई इन्धन’ शीर्षकको बजेट काटेर ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् !
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौतिका लागि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसद देवकोटाले खानेपानी मन्त्रालयको ‘पदाधिकारीलाई इन्धन’ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट कटौति गरी ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमा पदाधिकारीलाई इन्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन बजेट फजुल खर्च भएकाले त्यसलाई कटौति गरेर एक रुपैयाँ कायम गर्न काँग्रेस सांसद देवकोटाको सरकारसँग माग छ । उनले चालू खर्चबाट सो बजेट कटौति गरेर जनताको शुद्ध खानेपानी खान पाउने व्यवस्थाका लागि खर्च गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
सांसद देवकोटाले गरिव तथा भूकम्प पीडित जनतालाई उचित खानेपानीको व्यवस्था हुने गरी ठोस योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरिन् । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं उपत्यकाबासीले कहिले उपयोग गर्न पाउने हो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७६, आइतबार १२ : २८ बजे